Beddelaan Paxos Standard Token In US dollar
6019 macluumaadka wakhtiga dhabta ah ee lacagta digital.
Updated 27/01/2021 15:01
Beddelka Paxos Standard Token In US dollar. Paxos Standard qiimaha US dollar maanta ee suuqyada isweydaarsiga lacagta digital.
1 Paxos Standard = 1 US dollar
U beddelo Paxos Standard illaa US dollar celceliska heerka hadda la joogo. Wuxuu muujiyaa celceliska qiimaha beddelka Paxos Standard galay US dollar. Tani waa tixraac ku saabsan heerka sarrifka lacagaha 'lacagta digital'. 1 Paxos Standard oo kordhay 0.001473 US dollar. Paxos Standard kor buu u kacaa. The Paxos Standard sicirka doolarka Mareykanka ayaa kor u kacay US dollar by 15 boqol meelood meel barta boqolleyda.
Paxos Standard Token qiimaha maanta
Heerka Sarrifka Paxos Standard In US dollar
Usbuuc ka hor, Paxos Standard waa lagu iibin karaa 1 US dollar. Sanad ka hor, Paxos Standard waxaa lagu iibin karaa 0 US dollar. Sadex sano ka hor, Paxos Standard waxaa laga iibsan karaa 0 US dollar. Halkan waxaa lagu muujiyay jaantus heerka isdhaafsiga waqtiyo kala duwan. Toddobaadka gudihiisa, Paxos Standard illaa US dollar sicirka sarrifka ayaa is beddelay -0.05%. 0% - isbadal ku yimid heerka isdhaafsiga ee Paxos Standard ilaa US dollar sanadkii.
Paxos Standard (PAX) In US dollar (USD) qiimaha sicirka
Paxos Standard Token ugu fiican US dollar
Bixinta ugu fiican Paxos Standard Token qiimaha sarrifka maanta ee dhammaan suuqyada lacagta digital. Suuqa ugu fiican si aad u iibsato ama u iibiso Paxos Standard Token maanta.
EN PAX/USDC $ 1.01 $ 0.03151 -
Paxos Standard Token ugu fiican US dollar dhammaan suuqyada adduunka
Beddelaadda Lacagta digital Paxos Standard US dollar
Paxos Standard (PAX) In US dollar (USD)
1 Paxos Standard 1 US dollar
5 Paxos Standard 5.01 US dollar
10 Paxos Standard 10.01 US dollar
25 Paxos Standard 25.03 US dollar
50 Paxos Standard 50.06 US dollar
100 Paxos Standard 100.12 US dollar
250 Paxos Standard 250.31 US dollar
500 Paxos Standard 500.62 US dollar
Maanta 10 PAX = 10.01 USD. Waad ku badali kartaa 25 Paxos Standard ee loogu talagalay 25.03 US dollar . Beddelaadda Lacagta digital hadda 50 Paxos Standard ayaa ku siinaya 50.06 US dollar. Beddelaadda Lacagta digital maanta 100 Paxos Standard ayaa ku siinaya 100.12 US dollar. Waad iibin kartaa 250.31 US dollar for 250 Paxos Standard. Waad iibin kartaa 500.62 US dollar for 500 Paxos Standard.
Paxos Standard (PAX) In US dollar (USD) Heerka Sarrifka
Beddelaan PAX/WETH maanta 27 January 2021
16/09/2019 1 -
Paxos Standard ilaa US dollar ee 16 September 2019 - 1.001712 US dollar.
Paxos Standard (PAX) In US dollar (USD) shaxda qiimaha taariikhda
Paxos Standard iyo US dollar
Paxos Standard codka lacagta digital PAX. Paxos Standard ganacsiga bilawga suuqa sarrifka isweydaarsiga 27/09/2018.
US dollar codka lacagta digital USD. US dollar ganacsiga bilawga suuqa sarrifka isweydaarsiga 09/09/2020.